संसारमा यस्तो अचम्म पनि हुँदो रहेछ ? जसको सबैथोक सुनकै - Everest Dainik - News from Nepal
संसारमा यस्तो अचम्म पनि हुँदो रहेछ ? जसको सबैथोक सुनकै
मानिका अनौठा खालका शोख हुन्छन् । कसैले त्यसलाई पूरा गर्न सक्छन् भने कसैले रकम अभावमा शोखलाई पूरा गर्न सक्दैनन् ।
मानिसहरु सुन महंगो भएका कारण सुनका गहना जोडन् नसकेर चिन्तित छन् । तर ब्रुनाईका राजा (सुल्तान) भने सुनको दरबारमा बस्छन् । उनको सुनको हवाई जहाजसमेत छ ।
याे पनि पढ्नुस ‘सुल्तान’लाई ‘दंगल’ले पछार्यो, १३ दिनको कमाई ४८७ करोड
ब्रुनाइका सुल्तान हसनल बालकिया यस्तो शौखिन र विलासी मानिस हुन् की उनले प्रयोग गर्ने प्राय सामान सुनबाट बनेका छन् । ठूला व्यवसायीसमेत रहेका सुल्तानलाई आफ्नो धनसम्पत्ति देखाउने शोख छ ।
जसका कारण उनी सनुको जहाजमा सयर गर्छन् । उनको नुरल नामक दरबार पनि सुनले बनेको छ । उक्त दरबार बनाउन करिब ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको जनाइएको छ । सन् १९८४ मा बनाइएको उक्त दरबारमा १ हजार ७ सय ८८ कोठा रहेका छन् । जसमा २ सय ५७ वाथरुम छन् । दरबार २६ बर्ग फिटमा फैलिएको छ ।
उनको दरबारमा २२ क्यारेटको सुनको प्रयोग गरिएको छ । उनीसँग सात हजारभन्दा धेरै सुविधासम्पन्न कारहरुसमेत रहेहका छन् ।